Archive du 14-juin-2022
Kajy mamono vahoaka hatrany
Atao ahoana moa fa dia izay izany no mba politika hain’ny mpanao politika eto amin’ity firenena ity! Izay ihany koa no mba hain’ireo mpitondra nifandimby. Kajikajy politika!
Antananarivo Renivohitra Tanàn-dehibe maloto indrindra aty Afrika
Voasokajy ho tanàn-dehibe voalohany maloto indrindra aty Afrika i Antananarivo, ary fahatelo maneran-tany, araka ny fanasokajiana mivoaka amin’izao fotoana izao. Mitana ny laharana faharoa aty Afrika
Neken’ny depiote ilay « immunité » Ho lasa tsimatimanota ireo ben’ny tanàna ?
Lany teny anivon'ny antenimieram-pirenena omaly 13 jona tamin'ny 5 ora hariva ny lalàna manome "immunité" na zo tsy hohenjehina sy tsy hogadraina ho an'ireo ben'ny tanàna eto Madagasikara.
Rivo Rakotovao “Resaka solompenakoho ve no anenjehana ahy ?”
Nahatratra ora telo sy sasany teo ny fakana am-bavany sy fanadihadiana nataon’ny Bianco tamin'ny filohan'ny antenimerandoholona teo aloha Rivo Rakotovao omaly.
Sabotsy Namehana Nampitroatra vahoaka ny famonoana an’i Sarobidy
Niteraka savorovoro teny Sabotsy Namehana ny trangam-piarahamonina iray niseho teny an-toerana. Nitroatra mantsy ny vahoaka teny an-toerana omaly noho raharaha fahafatesana tovolahikely antsoina hoe
Tahiana Razanamahefa “Tsy maintsy miverina amin’ny fambolena isika”
Mivoatra ankehitriny ny toe-draharaha maneran-tany, hoy ny mpandraharaha misehatra eo amin’ny vary safiotra, Tahiana Razanamahefa.
Fanamboarana ny RN13 Ny “werawera” no lasa aloha
Ny kisehoseho ivelany no lasa aloha, vao fanombohana asa dia efa fety be tsy hifankahitana izany hoe: ny “werawera”
Cocaïne, kidnapping Efa tena mandeha ny fanadihadiana, hoy ny SEG
Nisy omaly ny valan-dresaka nataon’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG) Jeneraly Serge Gellé nanao tatitra fa olona 10 izay nahitana teratany vahiny dia sinoa roa, Afrikanina miisa 2,
Naivo Raholdina “Fototra ho an’ny fampandrosoana ny teny Malagasy”
Isan-taona dia manamarika ny iray volan'ny teny Malagasy ny fitondram-panjakana ka ny volana jona no fanatanterahana izany,